Angola · Global Voices teny Malagasy
Tantara misongadina mikasika ny Angola
Mozambika04 Jona 2022
Cap Vert12 Mey 2022
Tantara mikasika ny Angola
Tamin'ny taom-pifidianana iray, nihena ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety any Angola
Fanampenam-bava 05 Febroary 2022
Voadona mafy noho ny kolikoly ataon’ny governemanta ny haino aman-jery. Fahitalavitra maro no niharan'ny fanarahamason'ny fanjakana vao haingana taorian'ny fiatoana noho ny fitsikerana ny governemanta.
Mozambika 28 Oktobra 2021
Fifidianana 18 Septambra 2021
Tokony hatao ny volana Aogositra 2022 ny fifidianana, saingy efa miteraka adihevitra teo amin'ireo Angoley, indrindra noho ny tsy fitokisana ny fomba hitantanana ny dingana.
Fahasalamàna 29 Jolay 2021
Fitantanam-pitondrana 24 Jona 2021
Brezila 23 Jona 2021
Manohana an'i Portiogaly ho mpandresy ny hira noforonin'ilay mpiangaly mozika David Carreira niaraka tamin'ireo Breziliana Ludmilla sy Giulia Be ary ilay Angoley Preto Show.
Fivavahana 18 Mey 2021
Nanamafy ny Minisiteran'ny Serasera fa nampiato ilay orinasam-pahitalavitra Breziliana izy noho ny antony maha-"tsy teratany" ny tale mpanatanteraka, ary nilaza fa tsy nahazo fankatoavana ara-dalàna ireo mpanao gazety vahiny.
Lalàna 06 Avrily 2021
Nolaniana tamin'ny taona 2019 ny lalàna vaovao saingy tamin'ny volana Novambra 2020 vao nankatoavina ary ny fehezan-dalàna famaizana tamin'ny taona 1886 nandritra ny fanjanahan-tany Portiogey no nosoloin'izany.
Ady & Fifandirana 11 Marsa 2021
Nilaza ny hetsika mitaky ny fizakantena ho an'ny antsasany atsinanan'i Angola fa nitifitra tsy ankanavaka ireo mpanao fihetsiketsehana nanatrika ny hetsika tao amin'ny tanànakely fitrandrahana tao Cafunfo tamin'ny 30 Janoary ny polisy.